PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-11-04 - UGWETSHWE UKUDILIKELWA YIJELE NGOKUBULALA USOMABHIZINISI
UGWETSHWE UKUDILIKELWA YIJELE NGOKUBULALA USOMABHIZINISI
Ilanga langeSonto - 2018-11-04 - Izindaba - SKHOSIPHI MTHEMBU
UKHALE ngokuthi udla imbiza ethile emsiza esifeni esimphethe owesilisa wasolundi ngesikhathi ezincengela ukuba ijaji lingamniki udilikajele ngecala lokubulala.
U-ayanda Shezi (34), ugixabezwe ngodilikajele enkantolo ngolwesihlanu ngecala lokubulala usomabhizinisi wasethekwini, umnu Kidesh Ramjettan, esigamekweni esenzeke ezinyangeni ezine ezedlule.
Ngesikhathi ezincengela kujaji Samuel Sifiso Luthuli ukuba angamgwebi ukudilikelwa yijele, ubale ukuthi kunesifo esimphethe esingalapheki kanti usizwa wuhlobo oluthile lwembiza etholakala egoli kuphela.
Uphinde wazincengela ngokuthi walingeka ngesikhathi evuma ukubulala umufi ngoba wayefuna ukungcwaba uyisekazi oshone ngaso lesi sikhathi enza ngalo leli cala. Ngesikhathi esenkantolo, ushezi ubelokhu ebheke phansi engafuni abezindaba bamthwebule izithombe.
Kuzokhumbuleka ukuthi ILANGA libike kabanzi ngalolu daba nalapho umndeni kamufi ukhiphe umehlokaboni wemali engu-r300 000 obuzonikezwa nanoma ngubani obenolwazi olungaholela ekubeni kuboshwe umsolwa.
Kulesi sigameko sokubulawa kwalo somabhizinisi, kukhona nevideo eqophe sonke isigameko esikhombisa ushezi edubula umufi emqaleni aphinde amqedele eselele phansi.
Emuva kokuphuma kodaba, umsolwa ube esebanjwa ndawana thizeni egoli, wabe eseziculela wakhipha nabanye abehambisana nabo ngelanga lesigameko.
Enkantolo uphinde wadalula negama lowesilisa ongungqondo- ngqondo, okunguyena obebathumile ukuba bayogila lo mhlola. Esitatimendeni esifundwe nguAdv Sanjeev Juglal ongummeli wakhe, ushezi uveze ukuthi ukhokhelwe imali engu-r15 000 ngokuba abulale lo somabhizinisi.
Ngokusho kwakhe, umufi ubengamazi kodwa watshelwa ukuthi kumele abulawe ngoba ubezoba ngufakazi ecaleni elibhekene nalona wesilisa obebathumile.
Uphinde wadalula ukuthi basuka egoli yena nozakwabo ababili bafike balala kwelinye lamahhotela ebelikhokhelwe ngumsolwa obefuna kubulawe umufi.
Uthi nangelanga abulala ngalo umufi, ubehamba nozakwabo ababili (abasazovela enkantolo). Uthi oyedwa wabo waqala ngokuphuma eyobheka lapho kukhona umufi ngaphambi kokuba yena ayomdubula.
“Ngiyazisola kakhulu ngesenzo sami futhi saba wubulima. Lokhu engakwenza ngangiphoqwa yisimo njengoba bengishonelwe ngubabekazi. Ngangifuna imali yokuba ngiyomngcwaba yingakho ngalingeka nje,” kusho umsolwa esitatimendeni.
Uphinde waveza ukuthi unezingane ezine azondlayo kanti eyodwa yazo inezinyanga ezimbili izelwe. Uthi ungumshayeli wetekisi egoli, kanti uhola u-r2 000 ngenyanga, nakho lokhu kukodwa kwamenza ukuba alingeke.
Ujaji Luthuli uthe akasiboni isidingo sokuba inkantolo izwelane noshezi ngoba isenzo sakhe sakhombisa ubulwane yize ezivumele ukuthi ulenzile icala.
“Umufi ushiye umndeni wakhe nesilonda esingapholi. Ushiye ingane yakhe esizokhula ingenaye ubaba.
"Umufi ubeyilungu eliqavile emphakathini futhi ewuthanda umndeni wakhe. Yize ulivumile icala, kodwa ngikholwa wukuthi ukube ubuzisola ngempela ngabe wazihambisa emaphoyiseni,” kusho ijaji.
Umnu Anesh Ramjettan uthe sibajabulise kakhulu isigwebo, wathi sizothumela umyalezo oqinile nakwabanye abafuna ukwenza okufanayo. Uthi banethemba lokuthi uzoboshwa loyo o ngu ngqo n do ngqo n do ekubulaweni kukamfowabo.
“Nalaba ababili ababoshiwe siyethemba ukuthi basazothola okubafanele,” kusho yena. skhom@ilanganews.co.za
UZOGUGELA ejele u-ayanda Shezi (34), ogwetshwe ukudilikelwa yijele ngecala lokubulala usomabhizinisi wasethekwini.